ခေါင်းရွက်သည်.. မှောင်မှောင်သည်… အထမ်းသည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ခေါင်းရွက်သည်.. မှောင်မှောင်သည်… အထမ်းသည်
ခေါင်းရွက်သည်.. မှောင်မှောင်သည်… အထမ်းသည်
Posted by ဇီဇီ on Aug 15, 2014 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes, My Dear Diary, Society & Lifestyle | 51 comments
ဒီ ပို့(စ) က တီချယ်ကြီး တင်ဖူးတယ်။ ကျနော့ဆီက တင်မယ် ဆိုပြီး ယူသွားတဲ့ ပို့(စ)။
အဲဒါ ဇီဇီ အကောင့် မှာ တစ်ပေါင်းတည်း ထားချင်လို့ ထပ်တင်ပါတယ်။
မန္တလေး ကို လွမ်းရတဲ့ အကြောင်းတွေထဲမှာ မနက်၊ နေ့လယ်၊ ညနေ၊ ညပိုင်း မရိုးရအောင် လာတတ်တဲ့ အသည်မျိုးစုံလည်း ပါပါတယ်။
ကိုယ့်မြို့လေးမှာ နေနေကြတုန်းက သိပ်သတိမထားမိပေမဲ့ ဒီရောက်တော့ ……..
ကျန်တဲ့ မြန်မာအစားအစာလေးတွေ ဘယ်လောက်လွယ်လွယ် ရတယ်ပဲဆိုဆို…..
ဖြတ်သွားတဲ့ ဈေးသည် တစ်ယောက်မဟုတ် တစ်ယောက် ခေါ်ပြီး ပါလာတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ဝယ်စားရတဲ့ အချိန်မျိုးကတော့ ဘယ်လိုမှ အစားထိုးပြန်မရပါဘူး။
မနက်ခင်း လင်းတာနဲ့ ကြားရတဲ့ အသံက ပဲပြုတ်နဲ့ ကောက်ညှင်းပေါင်း။
ကောက်ညှင်းပေါင်း ပူပူလေးပေါ်မှာ စားတော်ပဲပြုတ်အိအိလေးတွေတင် နှမ်းထောင်းလေးဖြူးထားတာကို ဝယ်ပြီး အိမ်က ဖျော်ထားတဲ့ကော်ဖီလေးနဲ့ စလိုက်ရတဲ့ နေ့တွေ သတိရပါတယ်။
(အင်း နေ့လယ်ခင်း အသည်က နဲနဲ များတယ်။ ဘယ်သူကို စလွမ်းရပါ့)
၁) သာကူကျို၊ မုန့်လက်ဆောင်း၊ နို့ထမင်း၊ ဒိန်ချဉ် သည် –
နွေနေ့လယ် ပူပူမှာလာတဲ့ ဒီ အသည်ကို ခေါ်၊ မောင်နှမ တွေ ဝိုင်းပြီး ကိုကြိုက်ရာကိုယ်မှာစားကြတာပေါ့။
သာကူကျို နွေးနွေးလေးပေါ်မှာ အုန်းခြစ်လေးတွေဖြူးထားတာ စားမလား။
ထန်းညက်ရည်အေးအေးလေးနဲ့ မုန့်လက်ဆောင်းဖတ်ဖြူဖြူလေးတွေကို သောက်မလား။
ဒိန်ချဉ်နဲ့ ထန်းညက်ရေနဲ့ ခေါက်စားရကောင်းမလား စသည်ဖြင့် ကိုယ်ကြိုက်ရာကိုယ်ရွေးကြတာပဲ။
၂) ကြာဆံကြော်၊ ခေါက်ဆွဲကြော်သည် –
နဲနဲလေး ထပ်စောင့်လိုက်ရင်တော့ ဒီအသည်လာပါပြီ။
ကြာဆံကြော်၊ ခေါက်ဆွဲကြော် ဆီခြောက်ခြောက်ကြော်ထားတဲ့ အပေါ်မှာ ငါး အရေခွံကြော်လေး ကို အလွတ်မပေးကြပြန်ဘူး။
၃) ငှက်ပျောထုပ်၊ ကောက်ညှင်းထုပ်နဲ့ မုန့်ဦးနှောက် သည် –
အဲဒီ အသည်တွေ မမှီတော့ဘူး ဆိုရင်တော့ ငှက်ပျောဖက်လေးတွေနဲ့ ထုတ်ထားတဲ့ မုန့်လေးတွေ့ စောင့်ရုံပေါ့။
သူတို့က ငှက်ပျောထုတ် စားမယ်ဆိုရင် သကြားလေးဖြူးပေးတယ်။
မုန့်ဦးနှောက်စားမယ် ဆိုရင်တော့ မြေပဲမှုန့်နဲ့ ဆီချက်လေးထည့်ပေးတယ်။
(ညပိုင်းမို့ မရှိဘူးမထင်နဲ့ဗျ၊ ရှိပါ့)
၁) ပြန်ပေါင်းထုတ်၊ ဌာပနာထုတ်သည် –
ဝယ်စားကြည့်ပြီးမှ မုန့်ဖတ်ထုပ် ကိုပြောတာ။
ကောက်ညှင်းမှုန့်ကို နယ်ပြီး အုန်းသီးခြစ်နဲ့ထန်းလျက် ဒါမှမဟုတ် သကြားကို ဌာပနာပြီးမှ ပေါင်းတဲ့မုန့်ပေါ့။
(ပြန်ပေါင်းချင်တဲ့လူတွေက ဒါနဲ့ ယတြာချေတယ်တဲ့။ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိ။)
၂) ကျွဲခေါင်းသီးပြုတ် –
နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ပဲ ကျွဲခေါင်းပုံ (ချိုကလေး နှစ်ဘက်ကပါသေး) အသီးကို ပြုတ်ထားတာပါ။
၃) ဝက်မြေဥပြုတ် –
အခွံခွါပေးပါ့မယ်လို့ ကတိပေးတဲ့သူရှိမှပဲ စားချင်တဲ့ အစာပါ။
ချိုချိုစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ စားလို့ကောင်းသလောက် အခွံမည်းမည်းတွေခွါရတာ လက်ဝင်သလိုပါပဲ။
ဒါတွေက ခေါင်းရွက်သည်တွေပဲ ရှိပါသေးတယ်။
လွမ်းလက်စနဲ့တွန်းလှည်းသည်တို့အထမ်းသည်တို့ကို ပါ လွမ်းပရစေ။
၁) နို့ဟင်းမလိုင် –
နွားနို့အရသာလေးနဲ့ ချိုစိမ့်လေး စားရတာပဲ မှတ်မိပါတယ်။
၂) ရေခဲခြစ်၊ ရေခဲချောင်း၊ ရေခဲသုပ် –
အိမ်က တားမြစ်ထားသော အသည်ပါ။
ဆိုးဆေး ရောင်စုံပါသော ရေခဲအမျိုးမျိုးကို လျှာ ရောင်စုံဖြစ်အောင်ခိုးစားခဲ့ရပါတယ်။
(အသည်ကြီးကို လမ်းထိပ်မှာ စောင့်ဖို့ မျက်စပစ်ရသေး။)
၃) ရွှေရင်အေး၊ ကျောက်ကျော အုန်းနို့ဆမ်း။ –
ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိအောင်ကို အရသာကောင်း လွန်းပါရဲ့။
အသက်ငယ်တုန်းက သတိမထားမိပေမဲ့ ခု ဒီတစ်ခေါက်ပြန် စားမိတော့ သွေးတိုးတယ်။
(ဟီးဟီး။ ကိုယ့်အသက်ကို မေ့ပြီး အဝသွားစားတာ)
၄) မှောင်မှောင်သည် – အမျှော်ရဆုံး အသည်ပါ။
ငရုတ်သီး အစိမ်းမှုန့်နဲ့ နယ်ထားတဲ့ သစ်တော်သီးစိမ်း၊ သရက်သီးစိမ်း၊ -ငံပြာရည်၊ ငရုတ်သီးမှုန့်နဲ့နယ်ထားတဲ့ မက်မန်းသီး၊ စောင်းလျားသီး၊-ပဲမှုန့်နိုင်းချင်းနဲ့ သုပ်ထားတဲ့ သင်္ဘောသီးခြစ်လေးတွေ၊
(အမလေး၊ ရေးရင်းနဲ့သွားရည်ကျလာပြီ။ ရပ်မှ)
၁) တို့ဟူးသုပ်သည် –
၂ မျိုး ရှိတယ်။
ဗမာသုပ်နဲ့ ရှမ်းသုပ်လို့ပဲ အလွယ်မှတ်လိုက်တယ်။
ဗမာသုပ်က မြေပဲမှုန့်၊ မန်ကျည်းမှည့်ရေ တို့နဲ့ ချဉ်ငံစပ်သုပ်တယ်။
ရှမ်းသုပ်ဆိုတာက သံပုရာရည်၊ရှာလကာရေ တို့ကို နှမ်းထောင်းလေးတွေနဲ့ အရည်ရွှဲရွှဲသုပ်တာပဲ။
၂) မုန့်ဟင်းခါးသည် –
ဆိုင်ထိုင်သည်တွေ ပေါ်လာပြီးနောက် သိပ်မတွေ့ရတော့ဘူး။
ပဲနဲ့ချက်ထားတဲ့ ဟင်းရည် ကျဲကျဲကို ပူပူလေးစားရတာကိုတော့ အရမ်းကြိုက်ခဲ့တယ်။
အဲဒီလိုမှ အိမ်မှာ မစောင့်ချင်ရင်တော့ နီးနီးနားနားမှာသွားလို့ရတဲ့ လမ်းဘေးဆိုင်သေးသေးလေးတွေ အများကြီးပဲ။
၁) အကြော်စုံ –
ဘူးသီးကြော်၊ ဘယာကြော်၊ မတ်ပဲကြော်၊ ပြောင်းဖူးကြော်၊ ပဲကပ်ကြော် စသည်ဖြင့် မန်ကျည်းမှည့်အချဉ်ရည်လေးနဲ့ တို့စားရတဲ့ အကြော်စုံပေါ့။
၂) အပေါင်းသည် –
ခေါက်ပဲပေါင်းဆိုတဲ့ဟာ ပဲ မဲမဲလေးတွေနဲ့ ပေါင်းထားတာလည်းရတယ်။
ဒီ အဆိုင်နဲ့ အကြော်စုံဆိုင်က ကပ်ရပ်ဖွင့်တာများတယ်။
၃) ကော်ပြန့်စိမ်း၊ ကော်ပြန့်ကြော်၊ ကော်ပြန့်ကြော်သုပ် –
ဒေသစွဲတယ်ပဲဆိုဆို စားဖူးတဲ့ကော်ပြန့် တွေထဲ မန်းလေးက ကော်ပြန့်ပဲကြိုက်တယ်။
ကော်ပြန့်လို့ကြားဖူးကာစကတော့ နာမည် အတိုင်းပြန့်ပြန့်ပြူးပြူးမှတ်နေတာ။
အထဲမှာ ဂေါ်ဖီ၊ ပဲပင်ပေါက်၊ခါချက်ဥခြစ် တစ်ခါတစ်ခါ စိမ်းစားဥခြစ်လေးလည်းပါတယ်။အဲဒါတွေကိုအရင်ကြော်ပြီးထည့်လိတ်၊ ပြီးမှပြန်ကြော်တာ ကော်ပြန့်ကြော်။
ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ ကို ရေစစ်ပြီး အရွက်ထဲ ထည့်လိတ်ထားတာ ကော်ပြန့်စိမ်းလိတ်။
၄) မုန့်ပြစ်စလက် (မုန့်ပျားသလက်)၊ရေမုန့်၊ ခေါက်မုန့် –
ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ် ဆန်မှုန့်နဲ့ လုပ်တဲ့မုန့် တွေချည်းပဲ။
အဲဒီ ဆိုင်တွေက များသောအားဖြင့် ထိုင်စရာရှိဘူး။
အဖြူမုန့်ဆိုရင် နံနံပင်၊ငရုပ်သီးစိမ်းပါးပါးလှီးထည့်ပြီး စားတော်ပဲပြုတ်လေး ဖြူးလိုက်ရော။
ဒါက အစိမ့်ကြိုက်သမားတွေ အတွက်။
ရေမုန့် (ရန်ကုန်က ခေါက်မုန့်လို့ခေါ်တာ မနှစ်ကပြန်မှသိတယ်) က အပါးမျိုးပေါ့။
ပါးပါးပြားပြားလေးကို ခေါက်ပေးလိုက်တာ။ အိုးကင်းကတ် ကြွပ်ကြွပ်လေး ပိုစားကောင်းသေး။
အင်း၊ မနက်၊ နေ့လယ်၊ ညနေ၊ ည အဆာပြေ သရေစာတွေက ကုန်သလောက်ရှိပြီထင်ပါရဲ့။
ရှာရှာဖွေဖွေ ရေးရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်သေးတာပေါ့လေ။
နောက်တစ်ခေါက်မှပဲ မနက်ခင်းစာတွေ သီးသန့်ရေးတော့မယ်။
ခု ရေးရင်း ဗိုက်ဆာတဲ့ ဒဏ်မခံနိုင်တော့ဘူး။
ဘာလို့ ကော်မန့်မပေးတာလည်း ပြန်ရန်တွေ့မယ်။
အာ့ ဆို ခဏ ခဏ စားပေါ့။
မန်းလေးမှာက ရန်ကုန်မှာထက် မုန့်သည်တွေပိုစုံပြီး အရသာပိုကောင်းတယ် ..
အရင်တုန်းက နွေကျောင်းပိတ်ရက်တွေဆိုရင် မန်းလေးက အမျိုးတွေအိမ်ကို သွားလည်ပြီး တစ်လလောက်အထိ နေခဲ့ဖူးတယ် .. အကြိုက်ဆုံးအစားအစာက မနက်စာ လှည်းနဲ့လည်ရောင်းတဲ့ မြီးရှေ၊ လှည်းနဲ့လိုက်ရောင်းတဲ့ မုန့်ဟင်းခါး၊ မလိုင်တွေများတဲ့ တရုတ်တန်းဘက်က ဒူးမလိုင်တို့ ဖာလူဒါတို့ ..
ဈေးထဲရောက်ရင် အမြဲတမ်းစားဖြစ်တာက မုန့်တီ၊ မောင်းသံနဲ့လှည့်ရောင်းတဲ့ မောင်မောင်သည် ..
အစုံပါပဲ … မန်းလေးသွားပြီး အဲဒါတွေ သွားစားချင်စိတ်တောင်ပေါက်လာပြီ ..
အဲဒီ အထမ်းသည်တွေကို ဘယ်လိုကြိုက်မှန်းမသိဘူးးး
သူတို့ ပြင်တာကြည့်တတ်ရင်လည်း တကယ် အီးဇီးကွတ်ပဲ။
ခိုတောင်မုန့်တီကို ခေါင်းရွက်သည် လာရင် ဝယ်စားတာက သူပြင်တာကို ကြည့်ချင်လို့က တစ်ဝက်ပါတယ်။
ကျနော်က အသားမပါပဲ မစားတတ်လို့ ခိုတောင် မုန့်တီကို မကြိုက်ဘူးးး ခိခိ
မွသဲ ( 1782011 ) says:
အဟိ ရှမ်းပြည်ကနေ ရန်ကုန်ရောက်ခါစ အိုက်လိုဈေးသည်တွေက်ု အထူးအဆန်းလိုက်ကြည့်ဖူးတာမှတ်မိတယ်။ နောက်တော့ စားစရာမှန်းသိသွားတော့ လာသမျှအသည်မလွတ်တမ်းခေါ်အားပေးတာ။ နောက်ဆုံး အိုးတိုက်ဖွဲပြာသည်ကျမှပဲခံလိုက်ရတာ။ စားစရာမှတ်တာကိုး။ နောက်တော့ အသည်တွေကိုစီစစ်စားဖြစ်တော့တယ်။
နို့ဟင်းမလိုင်က ဆန်လှော်မှုန့်နဲ့နွားနို့သကြားပစ်အောင်ရောကြိုထားတာ။ မလိုင်လေးတွေတက်လာတာကိုမွှေလိုက်တော့သိမ့်သွားတာ။ လုပ်စားအုံးမှ :sar:
မန်းလေးမှာ အဖိုးအိမ်မှာ မောင် ၂ မ ဝမ်းကွဲ ၈ ယောက်ဗျာ။
တစ်သည်မဟုတ် တစ်သည် ဘယ် အသည်မှ မလွတ်ဘူးးး
နိုမလိုင်ဟင်းသည်တွေ မန်း ရောက်ခါစက ညနေဆို ကျုံးဘေးမှ စီကာရီကာရောင်းလို့ အခုတော့ အဲဒီမှာ ဖွင့်ခွင့်မပေးထဲက ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ အတော်နည်းသွားပြီလေ။ အခုနောက်ပိုင်းဆိုင်တိုးလာတာကတော့ ဘီယာ အကင်ဆိုင်တွေပါဘဲလေ။
အရင် တစ်ခေါက်ပြန်တော့ တွေ့ခဲ့တာ
ကိုရီးယား အကင်သည် ဆိုပဲ။
မမဂျီး ပို့စ်ကို ဖတ်ပီး
ငယ်ငယ်က လမ်းက ဖြတ်သွားတဲ့ ဈေးသည်တွေဆီက
ဝယ်စားခဲ့ရတဲ့ အခိုက်အတန့်ကို လွမ်းမိသွားသဗျာ …
အဲ့ဒီတုန်းက အဲ့ဒီဈေးသည်တွေ အော်သံကြားတာနဲ့
အန်တီကို ပြေးကပ်တော့တာပဲ ….
ငယ် ဘွ လေးကို လွမ်းတာ။
လက်ထဲပိုက်ဆံရှိရင် ဗိုက်ထဲ မုန့်ရောက်သွားရော။
ကျနော် မန်းလေးကို..လွမ်းရတဲ့ အကြောင်းအရင်းထဲမှာတော့.. .
လှုပ်စိလှုပ်စိနဲ့ .. ဦးပိန်တံတားကြီးရယ်.. ။
အမှိုက်တွေ… မျောနေတဲ့.. ကျူံးရေပြင်ကြီးရယ်…
ဆိုင်ကယ်တွေ.. ရှုပ်ထွေးနေတဲ့… လမ်းမင်္ကြီးတွေရယ်…
နောက်တစ်ယောက် (အဲလေ) နောက်တစ်ခု ရှိပါသေးတယ်!!
ဇီဇီ ခင်ဇော် (15102012)
မနေ့က မှတ်လိုက်မိတာက ဇီဇီ ခင်ဇော် (26102012)
အဲ တိုဟူးသုတ်ကြိုက်တယ် ၊
ဆန်တိုဟူးနော် ၊ အဝါမဟုတ် အဖြူရောင် ၊
ဆီတိုဟူးအရည်လေးနဲ့ ၊ ရှလွတ် ၊
ရန်ကုန်မှာ မမြင်ဖူးပါ ၊
ဆန်တို့ဟူးက ရှမ်းသုပ် တွေမှာ တွေ့ရတာ။
ဗမာသုပ်က ကုလားပဲ တို့ဟူး ပဲ သုံးတာ။
ရွှေကျီးမြင့်ဘုရားအရှေ့ဘက်ပေါက်နံဘေးမှာ ညနေ 1နာရီကျော်ရင်ဖွင့်တဲ့ဆိုင်လေးရှိတယ်။
ထိုင်ခုံဘဲရှိတယ် ကိုယ့် ပုဂံကိုယ်ကိုင်စား။
ပဲတို့ ဟူး ၊ဆန်တို့ဟူး၊ တိုဟူးနွေး နဲ့ ရှမ်းခေါ်က်ဆွဲရောင်းတာပါ။
ပွဲသေး 300 ပွဲကြီး500။
ဒန်ပေါက်၊ဆီထမင်း။အုံးထမင်း တစ်ထုပ် 200 ကောင်းမှကောင်း
သွားရည် ရှလွတ်ကနဲ့ ကျသွားအောင်ပြောပြတာအေ့
အုန်းမောင်း ငှက်ပျောသီး မစားရတာ နှစ်ချီပြီ။
အုန်းပေါင်း ငှက်ပျော်သီ ကြော် က ညနေ သုံး နာရီ ဆိုရင် ကျုပ်တို့ အလုပ် လုပ် တဲ့ ရုံးနား ကို နေ့ တိုင်း လာတယ်။
အုံးပေါင်းတစ်ရာဘိုး ငှက်ပျော်သီးကြော် တရာ ဘိုး ၀ယ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားထိုင် လက်ဖက်ရည် က 300ပေါင်း500ကျပ်ဆိုရင်
နေ့ ခင်း လက် ဖက် ရည် ချိန် ကို အေးဆေး စွာဖြတ်ကျော်နိုင်၏
ဟော အခု ပြောရင်းတောင်ေ အာ် နေ ပြီး ” အန်းပေါင်း ပျော သီးကြောာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာာ”
အသည် ရဲ့ အသံကို ဒီဘက်ကို လာ ထရန်စဖာ လုပ်လိုက်သေးးး
မန်းလေးမှာအမှတ်ရဆုံးက ကျောင်းသားဘ၀က စားတဲ့ ရေနီမြောင်းဘေးက ထမင်းဆီဆမ်း ငပိထောင်းနဲ့ အကြော်စုံ … ဗန်းမော်တိုက်ထဲက တောင်ကြာပန်းစားသောက်ဆိုင် …( ခုရောရှိသေးလားတော့မသိ ) …ညညအဆောင်နားလိုက်ရောင်းတဲ့ မုန့်ဖက်ထုပ်သည်…အလိုလေး ..လွမ်းလို့သေပြီ.. ဂျာမန်မေဂျာက .ကျော့်ကိုတဖက်သတ်ကြွေတဲ့…..မိုးကုတ်သူလေးရယ်…အာဟိ.
ဗန်းမော်တိုက်လမ်းထဲက တောင်ကြာပန်း စားသောက်ဆိုင်။
တီဗီဂိမ်း ဆိုင်ဘေးက ဟာလားးး
အခုတောင်ကြာ ပန်း ကို မစား ဖြစ်တာကြာပြီ။
သူက ဟင်းကို ခွက်သေးသေးလေးနဲ့ထည့်ပေးတာဗျ။
အခုမန်းလေးမှာက ရှမ်းထမင်းပုံစား ဆိုင်ဘဲစားကြတော့ တယ်။
73လမ်း 32လမ်းမှာ ဒီလို ထမင်းပုံစား ဆိုင်တွေပေါမှမော။
ကျနော်ကတော့ လား ရှိုးလေးမှာအမြဲစားတယ်။
တစ်ပွဲမှ 1200 ထမင်းလိုက်ပွဲ ကတစ်ပွဲ တစ်ရာ
အသား ဟင်းသုံးမျိုး၊ အသီးအရွက်သုံးမျုိး။
ွရွာထဲက ဂန်ဒါရီ ဆရာ အုပ် ကို သာမေးကြည့် ။
ရွာထဲကလူ ဘူ လာလာ အဲ ဆိုင်မှာလိုက်ကျွေးမယ်။
နယ်တကာလှည့်နေရတော့ ဘယ်မှာမှ ကိုယ့်နေရာလောက်အစားစုံပေါတာမတွေ့ရလို့ ငတ်လှသဗျာ
လူ အဆာလည်း မပြေ…..
စိတ် အဆာလည်း မပြေ….
စကားအတင်းစပ်….၀က်မြေဥဆိုလို့ … ပြောဖို့ကျန်ခဲ့လို့….မမ…၀က်မြေဥကို ပြုတ်လိုက်ခင်ဗျ..
. ပြီးရင် အခွံသင် …ပြီးတာနဲ့ ရေသန့်ထည့်…သကြားအနည်းငယ်..ဆားနှစ်ပွင့်သုံးပွင့်…..
ဘလန်ဒါထဲထည့်မွှေ…၀က်မြေဥဖျော်ရည်ဖြစ်ကရော…အလွန်မိုက်သဗျာ….အခုလက်ရှိ ရန်ကုန် Park Royal Hotel ဧည့်ကြိုနားမှာအဲ့ဖျော်ရည်… တိုက်တယ်ဗျ…ကျော်လေ..အဲ့ကိုသွားရင် ဆယ်ခွက်လောက်သောက်တယ်…အဟိဟိ…
အဲဒီဖျော်ရည်က ဒီမှာ ရသဗျ။
ရောက်စ က အရမ်းသောက်တာ။
ဘယ်လောက်သောက်တုန်း ဆို ခု ပြန်မကြည့်ချင်လောက်အောင် သောက်လိုက်တာ။
ရတနာပုံမှာ ကျောင်းတက်တုန်းကဆိုရင် တစ်နေကုန် ထမင်းမစားဘဲ သရေစာတွေနဲ့ တင် ပြီးခဲ့ရတဲ့ နေ့တွေကို ပြန်အမှတ်ရမိလေခြင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးး အဲ့တုန်းက အပြန်အလှန်ဒကာခံလိုက်ကြတာ ပျော်စရာကြီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
အဲဒီ သရေစာတွေ အဝ စားရင် ထမင်းလွတ်တယ်ဟ နော်။
မန်းလေး…နန်းကြီးသုပ် နာမည်ကြီးလေတော့…အလောင်းတော်ကသပ အသွား မဟာမြတ်မုနိနားမှာစားတာတော့….နည်းနည်းလေးတောင် မကောင်းးးဘာဂျောင်းးးးး
ဘယ်ဆိုင်စားစား ကောင်းတဲ့ နန်းကြီးသုပ်ကို ဘယ် မကောင်းတဲ့ ဆိုင်မှာ စားမိတုန်းးး
ဧကန်န မုဒ် အရ မကောင်းလို့များလားးး
မန်းလေးနန်းကြီးသုတ်က ဆီလေးများသလားလို့။ အရသာကတော့ဂွတ်
ကောင်းကင်ပြာရယ် ညည်းက ကြုံ တဲ့ ဆိုင်သွားစားတာကိုးအေ့။
ဗိုက်ဆာ အောင် နေနေ မယ် လို့ များ အစီအစဉ် မရှိ ဘူး လား ဒေါ်ဇီဇီ။ ;-))
အစား နဲ့ ဆို ဘာ ကိုမှ မလဲ ဘူး မဟုတ်လား။
ဒီလောက် အစား ကို ကြိုက်ပြီး စားနေတာတောင် မဝ တာ မင်္ဂလာတစ်ပါးဘဲ။
ရေခဲခြစ်၊ ရေခဲချောင်း၊ ရေခဲသုပ် နဲ့ မှောင်မှောင်သည် က ဒီခေတ် မှာ ရှိသေးလား။
ဒီ ကော်မန့်ကိုမြင်ပြီး သွားကြီး အဖြီးသားနဲ့။
ကျနော့ မင်းသားကြီး လည်း အဲဒီ အတိုင်းပဲ ပြောတာပဲ။
လူက မဝပါဘူး အရီးရယ်။
ပေါင်ချိန်စက်က ဂဏန်းတွေက တက်လာတာပါ။
ရေခဲခြစ်၊ ရေခဲချောင်း၊ ရေခဲသုပ် နဲ့ မှောင်မှောင်သည် ကရှိသေးတယ်။
၂၀၁၂ က ပြန်တော့ တွေ့တယ်။
-မန်းလေးမှာကြီးခဲ့တာကိုးဗျ… ပဲဒါးလှီး ဆိုတဲ့မုန့် ကိုအထူးသတိ၇တယ်
-အဖြူနှစ်လွှာကြားမှာ အမဲတစ်လွှာနဲ့…ခုတော့ရှိသေးလားမသိ :))
ထမင်းချက် ဦးဂွမ်တီတို့ မုတ်ဆိတ်ဖြူကြီးတို့ စားစားနေတဲ့ မုန့်ဟာမလားးး
နွေကျောင်းပိတ်ရက်တိုင်း မန်းလေးသွားရမယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး လုပ်ဖို့စင်းစားတာက
မှောင်မှောင်သည်ရဲ့ အချဉ်ပေါင်းနဲ့ သင်္ဘောသီးသုပ် အ၀စားဖို့ဘဲဗျ
အိမ်ရှေ့ကနေ မှောင်မှောင်ဆိုပီး မောင်းထုတဲ့အသံကြားတာနဲ့ လူက ခြံတံခါးနားပြေးကပ်ပီးသား…
အိုက်ဂလောက် ဆတ်ဆလူးရမ်းတဲ့ညီမကို ကျိမရတဲ့ အိမ်ကအကိုတွေအပြောကလဲသင်းတယ်…
” ဟဲ့ ကောင်မလေး နင် အိုက်မှောင်မှောင်သည်နဲ့များ ကြိုက်နေသလားတဲ့ ” :'(
ဘလိုဘဲပြောပြော တရက်လောက် မစားရရင် စိတ်မကောင်းတွေဖြစ်လို့
သူတို့ကလည်း သူ့ထက်သူ လူစွမ်းကောင်း စုံအောင် လုပ်ရောင်းရတယ်။
အဲ နောက် တစ်သုတ်တော့ ပြောတော့ဝူးးး
ဇီဇီခင်ဇော် စိတ်ညစ်အောင်လုပ်တဲ့ နည်း ကိုသိသွားပြိ။
နောက် ရက် မန်းလေးက စား သောက်ဆိုင် (လမ်းဘေးဆိုင်)တွေ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး
လမ်း30 -81လမ်း အမျုိးသားကျောင်းနံရံမှာကပ်ဖွင့် တဲ့ ခိုတောင်မုန့် တီ ရှယ်မှ ရှယ်ဘဲ
ငါးဖယ်နဲ့မှ သုံးရာ ငါးခေါင်း က နှစ်ရာဘိုး ဘိုက်ကို ကားရောဘဲ
ကောင်းမှကောင်း နောက်ရက် ဓါတ်ပုံ ရိုက်တင်လိုက်မယ်နော်
သများ..!!ကို စိတ်ညစ်အောင် လုပ်တဲ့ နည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပြီ။
လာသမျှ အသည်တွေ စုံအောင် ပတ်စားခဲ့ဖူးတဲ့
ကျောင်းပြီးစ အချိန်ကို သတိရ..
ခုတော့ ရုံးနဲ့အိမ်နဲ့ကြားမှာ ချာချာလည်နေလို့
ရုံးရယ် တော့ လုပ်လိုက်ပါ။
မန်းလေးလာရင် ဒါတွေ အကုန်လုံး ၀ယ်ကျွေးမှာလားဟင်….
မန်း​လေးမှာ ​ကျောင်းတက်​တုန်းက​ပေါ့ ညကိုးနာရီ ဆယ်​နာရီ​လောက်​ဆို အ​ဆောင်​​ရှေ့လာ​အော်​ဘီ ။ ပထမ​တော့ဘာလဲမသိ ။ နားထဲမသဲ မကွဲ ကြားလိုက်​တာက ” ထာပနာထုတ်​ အီကြာ​ကွေး ” ဆိုပဲ။ ​နောက်​မှ သူငယ်​ချင်း​တွေကို ​သေချာ​မေးကြည့်​​လေ​တော့မှ ” ထာပနုထုပ်​ ပူပူ​လေး ” လို့ ​အော်​သွားတာဆိုပဲ :)။ ၀ယ်​စားချင်​​ပေမဲ့ အမျိုးသားအ​ဆောင်​ဆို​တော့ ည ​ခြောက်​နာရီ ပိတ်​တာနဲ့ အပြင်​နဲ့ အဆက်​အသွယ်​ မလုပ်​ရဲလို့ ၀ယ်​မစားခဲ့ရပါဘူး ။ လွမ်းလိုက်​တာ အဟိ
လေသံ က အဟိ တဲ့။ လွမ်းတာက မုန့်ဖက်ထုပ်မှ ဟုတ်ရဲ့လားး
အနော်က လဗြွတ်သယ်… ဟောသမှာ ဝယ်ဂျအုံးမား..